Soomaaliya, 02 September 2019
Dad ku dhintay qarax ka dhacay Muqdisho
Ugu yaraan laba qof oo rayid ah ayaa ku dhimatay, lix kalena way ku dhaawacmeen qarax baabuur oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho.
Waqtiga uu furmayo shirka Galmudug oo la shaaciyey
Maamul goboleedka Galmudug ayaa sheegay in maalinta arbacadda ah ee September 4, la qabanayo shirka dib u heshiisiinta maamulkaasi oo ka dhacayo magaalada Dhuusomareeb.
Ilayska VOA: Wararka beenta ah ee baraha bulshada
Barnaamijka Ilayska VOA waxa uu toddobaadkan ku saabsan yahay wararka beenta ah ee lagu faafiyo baraha bulshada, iyo dhibaatooyinka ay bulshada ku leeyihiin. Waxaa soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Wasiirka Amniga Jubbaland oo Muqdisho ku Xiran
Booliiska Soomaaliya ayaa xaqiijiyey inay xireen wasiirkii amniga ee Jubbaland Cabdirashiid Xasan Nuur "Janan".
Dib-u-dhacyada Shirka Dib-u-heshiisiinta Galmudug
Muddo ku dhowaad bil ka hor ah ayaa la filayey inuu furmo shirkii dib u heshisiinta ee beelaha maamul goboleedka Galmudug, hase yeeshee furitaanka shirkaasi ayaa ugu yaraan laba jeer dib u dhacay arrimo farsamo iyo kuwo siyaasadeed dartood
Waxaa soo jeedinaya Ibrahim Xasan Garabey iyo Nur Xasan Nur.
Faysal Cali Waraabe oo bixiyey digniin la xiriirta doorashooyinka
Gudoomiyaha xisbiga mucaaridka Somaliland ee UCID ayaa sheegay in haddii doorashooyinka wakiilada iyo deegaanka ee Somaliland la qaban waayo, in taasi bedelkeeda la qaban doono doorasho madaxweyne oo xilligeeda ka soo hor marta.
Duqa cusub ee Muqdisho: Waan furaynaa jidadka xiran
Gudoomiyaha Cusub ee gobolka Banaadir ahna duqq Muqdisho, Cumar Maxamed Maxamuud Cumar Filish, ayaa sheegay in ay furi doonaan wadooyinka xiran xilligan ee magaalada.
Waa kuma Jeneral Odawaa Yuusuf Raage?
Toddobaadkan waxaa xilka taliyennimada ciidamada dawladda Soomaaliya la wareegay Jeneraal Odawaa Yuusuf Raage oo askarinnimada qortay 14 sano ka hor.